Laugh and the world laugh with you;
၀မ်းနည်းနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးက သင့်ဆီက ရယ်စရာလေးကိုငှားရမယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ.မှာလည်း သူ.ဒုက္ခနဲ.သူဘဲ။
သီချင်းဆိုပါ တောင်တန်းတွေက ပဲ့တင်သံ ပြန်လာလိမ့်မယ်။
Sigh,and it is lost on the air.
သက်ပြင်းချရင်တော့ လေထဲမှာ ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။
The echoes bounce toajoyful sound.
ပျော်စရာ အသံကို ပဲ့တင်သံ ပြန်ကန်ပေးပါတယ်။
သောကတွေ ဒုက္ခတွေကိုတော့ သူပြန်ကန်မပေးဘူး။တွန်.ဆုတ်သွားတယ်။
၀မ်းနည်းနေရင်တော့ သူတို.လှည့်ပြီးတော့ ထွက်သွားလိမ့်မယ်။
သူတို.ကသင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ အားလုံးကို အပြည့်အ၀လိုချင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ သင့်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုတော့ သူတို.မလိုအပ်ဘူး။
Be glad,and your friends are many;
စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရင် သင့်မှာမ်ိတ်ဆွေတွေ အများကြီးပဲ။
Be sad,and you lose them all.
စိတ်ဆင်းရဲနေရင်တော့ သင့်မိတ်ဆွေတွေ အကုန်လုံးကို ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
There are none to decline your nectared wine;
ပန်းဝတ်ရည်နဲ. လုပ်ထားတဲ့ဝိုင်ကို သင်ကပေးရင် ငြင်းမဲ့သူမရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့၊ဘ၀သည်းခြေရည်ကိုတော့ သင်တစ်ယောက်ထဲဘဲ သောက်ရလိမ့်မယ်။
Feast,and your halls are crowded;
ငတ်နေရင်တော့ ဘယ်သူကမှ လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
Succeed and give,and is helps you to live,
ဒါပေမဲ့သေဖို.အရေးကိုတော့ ဘယ်သူကမှ သင့်ကိုအကူအညီမပေးနိုင်ဘူး။
There is room in the hall of pleasure
ပျော်ပွဲခန်းမကြီးထဲမှာ လူအုပ်ကြီးတခန်းတနားသွားနိုင်ဖို. အတွက် နေရာအကျယ်ကြီးရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒုက္ခလမ်းကျဉ်းလေးမှာတော့ တစ်ယောက်ချင်းတန်းစီပြီးတော့ သွားရလိမ့်မယ်။
Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 18:52
စိုးထက် - Soe Htet !4April 2008 at 21:35
လက်တွဲဖေါ်ကောင်း မြန်မြန် တွေ့ပါစေ ...
ညမီးအိမ်5April 2008 at 02:33
ရွှေပြည်သူ5April 2008 at 03:07
“ဒါပေမဲ့ ဒုက္ခလမ်းကျဉ်းလေးမှာတော့ တစ်ယောက်ချင်းတန်းစီပြီးတော့ သွားရလိမ့်မယ်။ လက်တွဲသွားမဲ့သူမရှိဘူး။ အဖော်မရှိဘူး။”
သိပ်မှန်တာပဲ သူငယ်ချင်းရေ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားလေးတွေ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်း)
မေမိုးမခ5April 2008 at 09:46
မွေးလာတော့လဲ တစ်ယောက်တည်း သွားတော့လဲ တစ်ယောက်တည်းပဲပေါ့ သေရင်လဲ တစ်ယောက်တည်း
ဒီလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲ သူငယ်ချင်းရေ
myatnoe6April 2008 at 06:07
ကောင်းလိုက်တာ ကွာ။ အရမ်းကြိုက်တယ်။ နောက်မှ တခေါက်လာကူးရမယ်။ ကျေးဇူးပဲ။